ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဒီည
Standby mode နဲ့စောင့်နေပြီး လက်တချက် အဝေ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အသင့်တဲ့လား..၊ ဒီစကားလေး ကြိုက်လိုက်တာ..၊ ဒီပို့စ်က ဖတ်ရသူ အတွက်ပါ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းနဲ့ မောသွားစေတယ်၊ ကိုယ်ကပါ မဆီမဆိုင် ဘာဖြစ်လို့များ ပါလိမ့်လို့ ဝင်မေးနေမိ တော့မယ့် အဖြစ်...။း)
ဖတ်နေတဲ့သူတောင် နင့်ခနဲ ဖြစ်ရပါလားကိုမျိုးရေ..:(
Kaung lite tae aphwe anwe.I feel uneasy chest after reading it even inthe morning.Be cool Mg Myo.
စောင့်ရင်းမောနေတဲ့အဖြစ်ကို မြင်ကြည့်ရင်း မောတောင်လာတယ်..။
ဖတ်ရင်းနဲ့ တောင် မောလာမိတယ်ညီ...
Cool ! beautiful writing :)
ဒီတစ်ခါ စာရေးတဲ့ ပုံစံက စတိုင်တစ်မျိုးပါလား မောင်မျိုး
လိမ်ညာခံရခြင်းဟာလည်း မကောင်းဘူး.. မျှော်လင့်ရခြင်းမှ ကင်းပါစေ မောင်မျိုးရေ..
ရေးဟန်ကလေးကို နှစ်သက်မိပါသည်း))
မောင်မျိုးရေးသမျှထဲမှာ ဒီတစ်ခါရေးတဲ့ စကားပြေအရေးအသား အကြိုက်ဆုံးပဲ...နှစ်ခါပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်...အပေါ်ပိုင်းမှာ စာသားနဲ့ ၀ါကျဖွဲ့စည်းပုံ ပိုပြီးလှတယ်...
အယ် မွှားကုန်ပြီ ကျနော်ရေးတာမဟုတ်ဘူး ကျနော့် ဘလော့မှာ စာတွေမကြာမကြာရေးဖြစ်မယ့် စာဖတ်သူ ဆိုသူရဲ့စာပါ သူ့လက်ရာနဲ့ ကျနော့်လက်ရာက တစ်ခြားစီရယ် ကျနော်က ပိစ်ိလေးး)))
မှတ်ချက်ေ၇းဖို့ မေ့သွားတာ ကျနော့်အပြစ်း) လေဘယ်မှာတော့ သူရေးမယ့် စာတွေ သက်သက်ခွဲထားဖြစ်တယ် ကိုယ့်ဘလော့မှာတင်တဲ့သူ့ရဲ့ စာတိုင်း ဖတ်တဲ့သူတွေ ကြိုက်ကြတာတွေ့လို့ ၀မ်းသာပါတယ် ။
မောင်မျိုး ဒီအလွမ်းခံစားချက်နဲ့ ငါ ကဗျာရေးလို့ရပီးး)
ကဗျာဆရာ ... ကဗျာဆရာ ...း)
အဲ့လိုညတွေ လွန်ပါစေ မောင်မျိုးရေ။ လူတိုင်း ခံစားဖူးတဲ့ ညမျိုးတွေ ပါပဲ။
(ဘ၀ကို ပျော်ပျော်နဲ့ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ဖြတ်သန်းချင်သူ)